Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Danemaka » Nofaranan'ny Danemarka ny fameperana REHETRA-19 REHETRA amin'ny 10 septambra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Danemaka • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nofaranan'ny Danemark ny fetra COVID-19 rehetra tamin'ny 10 septambra
Ny fanasokajiana ny COVID-19 izay atsy ho atsy ho atsy aorina ho fandrahonana eo amin'ny fiaraha-monina dia namela ny manampahefana Danoa hanery ny fameperana toy ny fanaovana takalava misaron-tava sy ny fepetra takiana amin'ny «coronapass», ary koa ny fandrarana ny fivoriam-bahoaka ao amin'ny firenena.
Najanon'i Danemarka ny fanasokajiana ny viriosy ho "aretina krizy ara-tsosialy".
Hofoanan'i Danemarka ny fameperana mifandraika amin'ny areti-mandringana amin'ny volana septambra.
Ny valiny tsara dia vokatry ny "fifehezana ny valanaretina mahery".
Ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana any Danemark dia namoaka fanambarana androany izay nanambara fa nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny fanasokajiana ny COVID-19 ho “aretina krizy ara-tsosialy” izy ireo, satria voafehin'izy ireo izany. Midika io fanapahan-kevitra io fa tsy misy fototra ara-dalàna amin'ny fameperana mifandraika amin'ny areti-mifindra, ary noho izany dia hesorina ny 10 septambra.
"Voafehy ny valan'aretina, manana taha ambony amin'ny vaksiny izahay," hoy ny fanazavana.
Raha ny vokatra tsara dia vokatry ny "fifehezana ny valanaretina mahery", lalàna manokana natolotra tao Danemark hiady amin'ny virus mahafaty dia tsy hisy intsony manomboka ny 10 septambra, raha ny fanambarana ofisialy.
Ny fanasokajiana ny COVID-19 izay atsy ho atsy ho atsy aorina ho fandrahonana eo amin'ny fiaraha-monina dia namela ny manampahefana hanery ny fameperana toy ny fanaovana takalava misaron-tava sy ny fepetra takiana amin'ny «coronapass», ary koa ny fandrarana ny fivoriambe any Danemarka.
"Nampanantena ny governemanta fa tsy hitazona ny fepetra lava kokoa noho izay ilaina, ary eo izahay izao," hoy ny fanambarana, ary tsy mila fepetra manokana intsony na dia amin'ireo hetsika lehibe ho an'ny besinimaro aza, ary koa mikasika ny fidirana amin'ny firenena fiainana amin'ny alina. Na izany aza, zon'ny manampahefana ny manamafy ny fameperana mifandraika amin'ny COVID "raha manambana andraikitra lehibe eo amin'ny fiaraha-monina indray ny valanaretina."
"Tsy mbola vita ny asa mafy, ary ny fijerena izao tontolo izao dia manondro ny antony tokony hitandremana hatrany," Minisitry ny fahasalamana ao Danemark Nanoratra tao amin'ny Twitter i Magnus Heunicke, sady nidera ny “fitantanana ny valanaretina” ao amin'ny fireneny.
I Danemark dia iray amin'ireo firenena voalohany tonga tao anatin'ny fameperana mifandraika amin'ny areti-mandringana rehefa nandany ny didim-pitsarana navoakan'ny antenimieram-pirenena izay manasokajy io aretina io ho toy ny loza mitatao ho an'ny fiarahamonina tamin'ny martsa 2020. , ary nohamafisina nandritra ny areti-mandringana. Tamin'ny faran'ny volana Aogositra dia mihoatra ny 70% ny mponina vita vaksiny. Danemark dia nanoratra tranga maherin'ny 342,000 tamin'ity viriosy ity, ary olona maherin'ny 2,500 no maty tamin'izany.